कपनमा ढल र सडकको काम रोकिएपछि ठेकेदार र ईञ्जिनियरलाई फिल्डबाटै हकारे डा. भट्टराईले « Pariwartan Khabar
कपनमा ढल र सडकको काम रोकिएपछि ठेकेदार र ईञ्जिनियरलाई फिल्डबाटै हकारे डा. भट्टराईले
२३ माघ २०७५, काठमाडौं
डा. राजन भट्टराईलाई कुटनीति क्षेत्रका विज्ञको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । बोल्दा र भाषणमा खासै ठूलो स्वर नगर्ने उनी नेकपा भित्र बौद्धिक नेतामा समेत गनिन्छन् । आलोचकहरुले डा. भट्टराईलाई राजनीति कला नभएका नेताको रुपमा समेत बुझ्ने गर्दछन् । सबै ठाउँमा देखिने उनको शालीनता र भद्रता नेपाली राजनीतिमा फिट नहुने भन्नेहरुको पनि कमी छैन । उनका बानी, प्रस्तुति र व्यवहार हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छन् ।
डा. भट्टराईद्वारा सडक तथा ढल निरीक्षण गर्दै गरेको भिडियो :
निर्माणाधीन साततल्ले तरकारी बजार हुँदै आनीगुम्बा जाने ढल तथा सडक निर्माणको लागि शुरुदेखि नै डा. भट्टराईले पहल गर्दै आएका छन् । उनकै पहलमा बजेट समेत विनियोजन भयो, काम पनि शुरु भईसकेको छ । निर्माणको कामलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न स्थानीय समाजसेवी मिठाराम अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको निर्माण समितिले समेत आवश्यक सहयोग गरिरहेको छ । त्यतिमात्र हैन, स्थानीय सरकारले ढल सडक निर्माणको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न वडाध्यक्षहरुलाई विशेष निर्देशन समेत दिएको छ, सोहि अनुसार परियोजना जोडिएका बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १०, ११ र १२ ले १/१ जना वडा सदस्यलाई निर्माण अवरोध आएमा समाधान गर्ने भनी विशेष जिम्मा समेत दिएको छ । बजेट पनि छ, ठेकेदार पनि छ, स्थानीय सहयोग पनि छ, डा. भट्टराई आफैँ पनि लागिरहेकै छन् । त्यति हुँदाहुँदा पनि ठेकेदारको लापर्वाहीको कारण निर्माणको गति अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन् ।
सबै निकायले सहयोग गर्दागर्दै पनि कामले सोचे अनुसारको गति नलिएपछि संयोजक अधिकारीले डा. भट्टराईलाई फोन मार्फत कामले गति लिन नसकेको जानकारी गराए । फोनबाटै भट्टराईले अधिकारीलाई भनेछन,“सबै तिरबाट सहयोग हुँदाहुँदै कसरी काम रोकिन्छ ?” फोन राख्न नभ्याउँदै भट्टराईले तत्काल फिल्डमै आउने बचन दिएछन् । कतिपय समयमा फोन उठाउन समेत नभ्याउने डा. भट्टराईले आफैँले पारेको योजनामा अवरोध भएपछि तत्काल फिल्डमै आएर बुझ्ने सोचेछन् । उनी आउने जानकारी हाम्रो टिम सम्म आईपुग्यो ।
तरकारी बजारको छेउमै बाटो अवरोधको सुचना पढेपछि सरकारी गाडीलाई मुख्य सडक छेउमा रोकेर तरकारी बजार हुँदै डा. भट्टराई सहितको टोली ढल सडक निर्माणको प्रगति बुझ्दै/अवलोकन गर्दै अगाडि बढ्यो । निर्माणको प्रगति बारे बुझ्दै अघि बढेका डा. भट्टराई प्रहरी प्रभाग कपन नजिकै गणेश मन्दिर छेउ निर्माणाधीन ढल र बाटो रोकिएको ठाउँमै रोकियो । निर्माणाधीन ढल र सडक रोकिएको ठाउँमा उभिएरै डा. भट्टराईले जनप्रतिनिधि, स्थानीय, निर्माण समितिका संयोजक, साईड ठेकेदारसँग कुरा गरे । सबैको कुरा सुनेपछि उनले सडक विभागकी साईड ईन्जिनियरसँग फोनमै कुरा गरे । साईड ईञ्जिनियरको कुरामा चित्त नबुझेपछि डा. भट्टराईले तत्काल सडक विभागकै डीई र सडक विभागको महानिर्देशकलाई निर्माण अवरोध बारे असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।
निर्माण रोकिएको बिच सडकमा उभिएरै करिब १ घण्टा अवधिमा ठेकेदार, ईन्जिनियर र सडक विभागका महानिर्देशकलाई फोन गरे । माथिल्लो निकायमा समस्या नभएको बुझेका डा. भट्टराईले ‘ठेकेदारले ईन्जिनियरलाई र ईञ्जिनियरले ठेकेदारलाई दोष देखाउन’ थालेपछि आफ्नो शालीनता र भद्रता तोडे । अनुरोधको भाषा प्रयोग गरिरहेका भट्टराईले निर्देशन दिन थाले ।
फोनमा कुरा गरेका डा. भट्टराईले घना वस्तीको बिचमा रहेको ढल र सडक समयमा निर्माण नहुँदा आम नागरिकलाई पार्ने असरबारे बेवास्ता गरेको भनी निकै रिसाए । साईड ईञ्जिनियर काम प्रति जिम्मेवार नभएको भन्दै जिम्मेवारी पुरा नगरे, तत्काल फेर्ने, पैसाको कारणले रोकिएको भए आफूले त्यसको जिम्मा लिने तर समयमा नै काम हुनुपर्ने कडा निर्देशन दिए । भट्टराईले फोनमा कुरा गर्दा स्थानीय र सहभागीहरु आ–आफ्नै धुनमा थिए । उनले को सँग कुरा गरे भन्ने धेरैले थाहा समेत पाएनन् ।
फोन गफमै ठेकेदारले दाजुसँग भेट्नु छ भन्न भ्याए तर डा. भट्टराईले ‘पहिले काम गर्नुस् अनि भेटौला’ भन्दै कामलाई गतिदिन निर्देशन दिए । सडक विभागका महानिर्देशक र डीईले भट्टराईलाई समयमै काम सक्ने बचन दिए । भट्टराईले पनि ‘बजेटको कारणले रोकिएमा म छु’ भने । तर साईड हेर्ने ईन्जिनियरले चिनेर वा नचिनेर भट्टराईसँग निकै कुरा गर्न थालिन, उनको मात्र कुरा सुनिरहेका डा. भट्टराईले अन्त्यमा ईन्जिनियर साप भन्दाभन्दा भन्दै बैनी कुरा सुन्नुस्, तपाई त एकोहोरो पो बोल्नु हुँदोरहेछ ? भन्दै कुरा हैन काम गर्न निर्देशन दिए । डा. भट्टराईले सडक निर्माणबारे स्थानीय, जनप्रतिनिधि, निर्माण समितिका संयोजकसँग छलफल गर्दै कुनै हालतमा काम तोकिएकै समयमा पुरा गराउनु पर्ने र आवश्यक परेमा आफूले जस्तो सुकै भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
अफिस, कोठा र फोनबाट मात्रै जनताको काम गर्ने, शालीन, नम्र र भद्र स्वभावका डा. भट्टराईले गनाईरहेको ढलछेउ, सडकमै उभिएर जे गरे, त्यसले उनलाई कुटनीति र बौद्धिकता मात्रै हैन, आवश्यक परे, जनताको लागि, विकासको लागि जस्तो सुकै गर्न सक्ने नेता पो रहेछन्–एक स्थानीयले हामीसँग खुसुक्क भने, अब चाहिँ भट्टराईले पारा ल्याउलान जस्तो छ !
०४ भदौ २०७६, काठमाडौं आदरणीय नेतागण, राजसंस्था सहितको प्रजातान्त्रिक सरकार, दल विनाको राजाको निरंकुश सरकार
०२ भदौ २०७६, काठमाडौं हाँडीगाउँको संस्कृति, सम्पदा र पर्यटनको प्रवर्द्धन र विकासको लागि आयोजित विशेष
०२ भदौ २०७६, काठमाडौं आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
नेपालको असन्तुष्टिः ‘पहिले खनाललाई, अहिले मलाई अपमान’
०२ भदौ २०७६, काठमाडौं एकीकरणको १५ महिना बितिरहँदा नेकपाभित्र वरियताको बारेमा एउटा तरङ्ग उत्पन्न भएको